हास्य टेलिशृंखला ‘भद्रगोल’का कलाकार हुन्, हरि निरौला । धेरैले उनलाई ‘ककरोच’ नामले चिन्छन् । ‘ककरोच’ को डे«डलक कपाललाई लिएर सिरियलभित्रका ‘बले’ ले सधैँ भन्ने गर्छन्, ‘ककरोच बोरोको कपाल चाहिँ हो
रंग खबर, काठमाण्डौं । नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक साता प्रशारण हुने दुई हाँस्य टेलिफिल्म ‘जिरे खुर्सानी’ र ‘भद्रगोल’ अनिश्चित कालका लागि बन्द भएका छन् । विज्ञापन कम्पनी वर्ल्ड भिजन एड्भर्टाइजिङको गद्धारीले गर्दा प्रसारण
‘ क्ल्याप बोर्ड’ प्रस्तोता घिमिरेले ल्याए नयाँ कार्यक्रम ‘जीवन यात्रा’
रंगखबर, काठमाण्डौं । विगत एक दशकदेखि चर्चित फिल्मी कार्यक्रम ‘क्ल्याप बोर्ड’ संचालन गर्दै आएका रंग पत्रकार राजन घिमिरेले अर्को नयाँ कार्यक्रम पनि शुरु गरेका छन् । एनटिभी प्लसमा ‘जीवनयात्रा’ नामक
‘तितो सत्य’ लाई परेन बन्दको प्रभाव । दिपाले लिइन् बन्दमा सुटिङको मज्जा
रंग खबर, काठमाण्डौं, माघ ०६– नेपाल बन्दका कारण आज देशभर कामकाजहरु प्रभावित भए । नेपाली कला क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा प्राय धेरैजसो फिल्मको छायांकन पनि प्रभावित बन्यो । तर हरेक मंगलबार
रंग खबर, काठमाण्डौं । आफुलाई करिब चालिसवटा भूमिकामा प्रस्तुत गरिसकेका ‘मेरी बास्सै’ का मुख्य कलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ को पछिल्लो श्रृंखलाबाट नयाँ भूमिका थपिएको छ । बामदेव गौतमको क्यारेक्टरलाई केही
रंग खबर, काठमाण्डौं । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोलकी कलाकार रक्षा श्रेष्ठ हिजोआज दंग छिन् । एक दर्जन बढी विज्ञापन र म्युजिक भिडियोमा काम गरिसक्दा पनि उनलाई कसैले
यस्तो छ मोदीको क्यारिकेचर गरेको भन्दै रोकिएको ‘तितो सत्य’ को श्रृंखला । भिडियो
रंग खबर, काठमाण्डौ । भारतीय नरेन्द्र मोदीको क्यारिकेचर गरेको भन्दै अघिल्लो बिहिबार प्रसारण रोकिएको हास्यश्रृंखला तितो सत्य सो श्रंखला युट्युवमा सार्वजनिक गरिएको छ । गत आइतबार नेपाल टेलिभिजन तथा तीतो
मोदीमाथि हास्य व्याङ्ग्यका कारण रोकिएको तीतो सत्य प्रशारण हुने
रंग खबर, काठमाण्डौं, मंसिर २५– भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीमाथि हास्य व्याङ्ग्य गरेको भन्दै गत साता प्रशारण रोकिएको साप्ताहिक हास्य टेलिश्रृङ्खला ‘तीतो सत्य’ आज (बिहिबार) देखि प्रशारणमा आउने भएको छ । एनटिभिको
‘तितो सत्य’ का दिपक र दिपाश्रीको बिहे !
रंग खबर, काठमाण्डौ, मंसिर ०१– टेलिभिजनको पर्दामा चर्चित जोडी मानिएका दिपकराज गिरी र दिपाश्री निरौला रियल लाईफको जोडी कहिले बन्लान् ? यिनीहरुलाई दुलहा र दुलहीको रुपमा कहिले देख्न पाइने हो
एक हप्ता पछि सर्यो ‘तिम्रो ल्यांग ल्यांग २’
‘एक तर्फी माया’मा श्वेता ~ भिडियो ~
‘मायाले मलाई बोलायो’मा स्मिता र सलोनको जोडी ~ भिडियो ~